K30 Ultra 5G တဲ့လား?? — Anycall Mobile
K30 Ultra 5G တဲ့လား??
By liam July 31, 20202Mins Read
ဒီလအစောပိုင်းလောက်တုန်းက XDA Developer မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေအရ Redmi K30 Series ထဲမှာ Redmi K30 Ultra 5G ဆိုတဲ့ ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးထပ်ထွက်လာမယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ အခုမှာတော့ Redmi K30 Ultra 5G လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ M2006J10C ဖုန်းတစ်လုံး ရဲ့ Specs တစ်ချို့ တရုတ် Website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TENNA မှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။
Redmi K30 Ultra 5G Specifications (ကောလဟလသာ)
K30 5G Ultra ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ M2006J10C ဖုန်းမှာ Notch မပါတဲ့ Design နဲ့အတူ 6.67-inch AMOLED Display ပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Display ရဲ့ Resolution ကတော့ Full HD+ Resolution ( 1080 x 2400 pixels ) ရှိပါတယ်။ AMOLED Display ဖြစ်တဲ့အတွက် Under-display Fingerprint လည်းပါဝင်လာမှာပါ။ XDA Developer ရဲ့သတင်းအရ Redmi K30 Ultra 5G ရဲ့ Display မှာ 120Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့ပေးလာမယ်လို့သိထားရပါတယ်။
နောက်ထပ် ဖုန်းမှာ 33W Fast Charging ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ 4,500 mAh ပါဝင်လာမယ်လို့ TENNA စာရင်းထဲမှာ ဖော်ပြပေးထားပြီး Android 10 OS အပေါ်အခြေခံထားတဲ့ MIUI 12 ကို Run ပေးလာဖို့ ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။
M2006J10C ဖုန်းမှာ 2.6GHz Octa-Core Processor နဲ့ အားဖြည့်ပေးလာမှာဖြစ်ပြီး ဒီ Processor ဟာ MediaTek Dimensity 1000+ Chipset ဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဖုန်းဟာ6GB, 8 GB, and 12 GB Ram နဲ့ 128 GB, 256 GB, 512 GB ဆိုပြီး Version သုံးမျိုးထွက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ K30 5G လိုပဲ SD Card တော့ ထည့်လို့ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Camera အတွက် Redmi K30 Ultra 5G မှာ K30 Pro ရဲ့ ကင်မရာပုံစံနဲ့ဆင်တဲ့ 64-megapixel quad camera ကိုတပ်ဆင်ပေးလာဖို့ရှိနေပြီး Selfie အတွက် 20-megapixel pop-up selfie camera ကိုသုံးပေးလာမှာပါ။
Redmi K30 Ultra 5G ရဲ့ အရွယ်စားကတော့ 163.3 x 75.4 x 9.1mm ရှိပြီး အလေးချိန် 213 grams ရှိလာမယ်လို့ TENNA ကဖော်ပြထားပါတယ်။ ဖုန်းမှာ Blue, black, green, pink, red, white အရောင် ၅ မျိုး ရွေးချယ်လို့ရမှဖြစ်ပြီး August လလောက်မှာ ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်လာဖို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
120Hz Refresh Rate AMOLED Display နဲ့သာ ထွက်လာရင်တော့ K30 Ultra 5G ဟာ Mid-range ဖုန်းတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာတော့မှာလား?? စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပါပြီ..
K30 5G UltraRedmi